မြန်မာ ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ဖို့ ဘာကြောင့်ကြိုးစားရသလဲ
၂၉ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၀
မိတ္ထီလာ မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနဲ့ အာကာသပညာတက္ကသိုလ်
ဒီတပတ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနဲ့ အာကာသကညာ တက္ကသိုလ်ကနေ နိုင်ငံ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ဖို့ ဘာကြောင့် ကြိုးစားကြတယ် ဆိုတာကို ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာကြည်သွင်ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
Unicode / Zawgyi
ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ဖို့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ပထမဆုံးစပြီး လုပ်ဆောင်တာဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပြီး Intelsat ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး channel လိုင်းကို ငှါးသုံးတဲ့ MyanmarSat 1 နဲ့ ၂၀၁၉ မှာ MyanmarSat2တို့ကို လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး လာမယ့် ၂၀၂၁ နှစ်ဆန်းမှာတော့ ကမ္ဘာမြေလေ့လာရေး ဂြိုဟ်တုကို လွှတ်တင်ဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ပထမလွှတ်တင်ခဲ့တဲ့ ဂြိုဟ်တု ၂ ခုနဲ့ အခု နောက်ဆုံးလွှတ်တင်မယ့် မြေကမ္ဘာလေ့လာရေးဂြိုဟ်တု ကွာခြားချက်ကို ကြည့်ရအောင်ပါ။
ဒေါက်တာကြည်သွင်။. ။“ဒီ communication satellite ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုကတော့ ပထမကcondosat ဆိုတာ- နိုင်သလောက်နဲ့ transponder ဝယ်ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာ အင်တာနက်တို့ ရုပ်သံထုတ်လွှတ်တာတို့ကို အသုံးချတယ်။ နောက် အခု ဒုတိယတဆင့်က jointSat ပေါ့နော်။ intelSat နဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနဲ့ တဝက်စီပေါ့။ ဆိုတော့ နည်းပညာအားဖြင့်က Intelsat က အကုန်လုပ်တာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့က ပိုက်ဆံထည့်ဝင်ပေးတာ၊ ရလာတဲ့ဟာကို ကျနော်တို့ အသုံးချတာ။ ဒါပဲရှိတာပေါ့နော်။
အခုဒီ အကောင်အထည်ဖေါ်မယ့် ကမ္ဘာမြေ လေ့လာရေးဂြိုဟ်တုကတော့ ကျနော်တို့ ဆောက်တာ ပြုတာရော အကုန်လုံး အလုံးစုံ ကိုယ့်ဆီက ပိုင်တဲ့ ဂြိုဟ်တုပေါ့နော်။ နောက် ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာပဲ ကျနော်တို့က တခါထဲ နည်းပညာလွှဲပြောင်းမှု ဆိုတဲ့ဟာ၊ ဒါက ဒီဂြိုဟ်တု တခုကို ဘယ်လို ဒီဇိုင်း လုပ်မလဲ၊ ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ၊ လွှတ်တင်မလဲ၊ ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းမလဲ၊ ရလာတဲ့ image ဓါတ်ပုံတွေကို ဘယ်လို အသုံးချမလဲ၊ ဒီဟာတွေအတွက် HR (Human Resources) training သင်တန်းပေးလေ့ကျင့်တာတွေလည်း ဒီအထဲမှာ ပါမှာပါ။ ဒါက ရေရှည်အတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်တာပါ။ ဒါက ကိုယ်တိုင် အလုံးစုံ ပိုင်တဲ့ ဂြိုဟ်တု ဖြစ်တာပေါ့။ ဟိုတုန်းကတော့ တဝက်စီနဲ့ ငှါးတာနဲ့ ပေါ့နော်။
အခု မိုက်ခရို စက်တလိုက် microsatellite ကတော့ ကုန်ကျစားရိတ်လည်း သက်သာတယ်။ ဆိုတော့ လွှတ်တင်ရတဲ့ စားရိတ်တွေကလည်း သက်သာတယ် ပေါ့နော်။”
မေး။. ။“ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မိုက်ခရို စက်တလိုက်ကို ရှင်းပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာကြည်သွင်။. ။“စက်တလိုက်တွေကို သူတို့ရဲ့ weightအလေးချိန်ပေါ် မူတည်ပြီး အတန်းအစား ခွဲတာပေါ့နော်။ ဥပမာ ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု communication satellite ဆိုရင် ၂ တန်- ၃ တန်လောက်အထိ လေးတယ်။ နောက် geostationary ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာပတ်လမ်းက အဝေးကြီး ပေါ့နော်။ ကီလိုမီတာ ၃ သောင်း ၄ သောင်း အဲဒီ လောက်အထိကို တင်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အတူတူပဲ ကမ္ဘာက ၂၄ နာရီမှာ တပတ်လည် သလိုပဲ ဒီဂြိုဟ်တု ကလည်း ကမ္ဘာတပတ် ပတ်ဖို့ရာ ၂၄ နာရီ ကြာတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က communicate လုပ်လို့ ဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ broadcasting အသံလွှင့်လို့ ရတယ်။ သူက အကြီးဆုံး ပေါ့နော်။ ကီလိုဂရမ် တထောင်နဲ့ ငါးရာ ကြားထဲမှာ လေးတယ်။ ကီလိုဂရမ် တရာ အထိအောင်က မိုက်ခရိုစက်တလိုက် ထဲ ပါပါတယ်။ သူ့အောက် နဲတဲ့ ၁၀ ကီလိုဂရမ် တို့. ဘာတို့က နာနိုစက်တလိုက်တို့၊ ပီဆို စက်တလိုက်တို့ ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ အလေးချိန်ပေါ် မူတည်ပြီး ဂြိုဟ်တုအမျိုးအစား ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်တာပါ။”
မေး။. ။“အခုလွှတ်တင်တဲ့ ဟာက Micro Satellite ပါလား ဆရာ။”
မေး။. ။“ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တု ဘယ်နှစ်လုံးလောက် လွှတ်တင်ဖို့ လျာထား ပါလဲဆရာ။”
ဒေါက်တာကြည်သွင်။. ။“အခု ဒီစီမံကိန်းထဲမှာ စောစောက ပြောတဲ့ ဒီ ဂြိုဟ်တု ၂ လုံးတင်မှာ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ဂြိုဟ်တုကို ထိန်းကျောင်းမယ့် ground control station မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးစခန်း မြန်မာပြည်မှာထားရှိမယ်ပေါ့။ ကိုယ်တိုင် နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ဂြိုဟ်တုကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထိန်းကျောင်း မယ်ပေါ့နော်။ ကျနော်တို့က နည်းပညာ ရဖို့ အတွက် Human Resources တွေကိုလည်း တွဲပြီးတော့ train လုပ်မယ်။ ထရိန်းလုပ်ရင်းနဲ့ စက်တလိုက် laboratory ဓါတ်ခွဲခန်း မြန်မာပြည်မှာ ထူထောင်မယ် ပေါ့နော်။ ဂြိုဟ်တု - ဒီမိုက်ခရိုစက်တလိုက် ဆောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ (equipment) တွေ တခါထဲ ဒီစီမံကိန်း ထဲမှာ ပါတယ်။ ပါတော့ ၊ နောက် တတိယမြောက် အလုံး ဆို လိုတဲ့ ပစ္စည်းပဲ ဝယ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် develop လုပ်ပြီးတော့ ဆိုရင် ကုန်ကျစားရိတ်လည်း အများကြီးသက်သာသွားမယ်။ ဂြိုဟ်တု ဆောက်ရမယ့် နည်းပညာလည်း ပိုရတာပေါ့။
ဒီမိုက်ခရို စက်တလိုက်နဲ့ ကျနော်တို့က communication ဆက်သွယ်ရေးကို ကူးယူမယ် ပေါ့နော်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့် နိုင်ငံရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ အတွက်ရော၊ ကမ္ဘာမြေ လေ့လာရေးကဏ္ဍ အတွက်ရော ဒီဂြိုဟ်တုကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် တည်ဆောက် နိုင်တဲ့အထိ ကျနော်တို့က ရေရှည် ရည်ရွယ်တာပေါ့ခင်ဗျ။”
ဒါ တော်တော်ဝမ်းသာစရာပါ ဆရာ၊ ဒါမျိုး လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာလေ။
ဒေါက်တာကြည်သွင်။. ။“ကျနော်တို့က ဒီဂြိုဟ်တုနည်းပညာက နိုင်ငံတခုရဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အတွက် အများကြီး အထောက်အကူ ပြုတယ် ဆိုတဲ့ဟာကို သိတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း လုပ်နိုင်တဲ့ အင်အားပေါ့နော်၊ နောက်တခါ ပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ ငွေရေး ကြေးရေးပိုင်းရော၊ တခါ ဒီလို လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ လူကြီးတွေ ပေါ်မှာလည်း အများကြီး မူတည်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရသက်တမ်း တုန်းကလည်း တခု ကြိုးစား ခဲ့ဘူးတာ ရှိတယ်။ သို့သော် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ ဘူး ပေါ့နော်။ အခု လက်ရှိ အစိုးရ လက်ထက်မှာတော့ ဒါကို တော်တော် လေးကို အားလည်း ပေးတယ်။ ဒီ ဂြိုဟ်တု လွှတ်နိုင်တယ် ဆိုတာ ဂုဏ်တခုအတွက် လုပ်တာမျိုး မဟုတ်ဖူး။ တကယ်လိုအပ်ချက်ကို ရှိနေတာ။”
မေး။. ။“ဘယ်လို လိုအပ်ချက်ပါလဲ၊”
ဒေါက်တာကြည်သွင်။. ။“ဒိဂြိုဟ်တုအတွက် feasibility ဖြစ်နိုင်ချေ တွေကို တွက်ဖို့ လုပ်တဲ့ အခါ ဒီ ဝန်ကြီးဌာနတွေကို ကျနော်တို့ စစ်တမ်းတွေ ကောက်ပါတယ်။ ဒီ Satellite Image ကောင်းကင်ဂြိုဟ်တု ဓါတ်ပုံတွေ ဘယ်လောက် လိုသလဲ၊ ဘယ်လောက် resolution လိုသလဲ၊ ဘယ်လောက် ဧရိယာ လိုသလဲ၊ တလကို ဘယ်နှစ်ကြိ်မ် လိုသလဲ၊ တနှစ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် လိုသလဲ စသဖြင့် ဒီဟာတွေ အကုန်လုံး မေးခွန်းတွေ စုပြီးတော့ ကောက်ပါတယ်။ ကောက်တဲ့ အခါမှာ ရလာတဲ့ သူတို့ရဲ့ resolution တွေ၊ ဧရိယာတွေ အကြိမ် အရေအတွက် တွေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဝယ်ရမယ် ဆိုရင် အဲဒီ ၂၀၁၈ တုန်းက ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံ ဈေးနဲ့ တွက်တာကို တနှစ်တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ဆယ်သန်းကျော် လောက် ကုန်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဝယ်နိုင်လား ဆိုတော့ မဝယ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီလေက်ကြီးကို။ မဝယ်နိုင်တဲ့ အတွက် သုံးသင့်ရဲ့ သားနဲ့ကျနော်တို့ မသုံးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အလကားရတဲ့ image ပုံတွေပဲ ကျနော်တို့ သုံးရတယ်။ ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု - resolution တွေက မကောင်းဘူး။ သို့သော် ဒါနဲ့ပဲ အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ရတယ် ပေါ့နော်။
အခု ကျနော်တို့က ဒီ စီမံကိန်း တခုလုံးမှ စောစောက ပြောသလို ဂြိုဟ်တု ၂ လုံးပါမယ်။ HR တွေ ထရိန်နင် လုပ်တာ ပါတယ်။ satellite lab ပါတယ်။ မြေပြင်ထ်ိန်းသ်ိမ်းရေး စခန်း ground station တွေ ပါတယ်။ အကုန်လုံးပေါင်းမှာ ကျနော်တို့က ၁၅ သန်း ကျော်ကျော် ၁၆ သန်း နီးပါးပဲ ကျတယ်။ ဆိုတော့ စောစောလေးက image ဝယ်ရင်တောင် ကျနော်တို့က တနှစ်ထဲတင် ဒေါ်လာ ဆယ်သန်းလောက် ကုန်မယ်။ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက် အနေနဲ့။ အခု ကျနော်တို့က ပထမ တလုံရယ် နောက်တခါ ဒုတိယအလုံးလွှတ်မှာက စုစုပေါင်း ၈ နှစ်လောက် သုံးလို့ ရတယ်။ ၈ နှစ်ဆို ထားပါတော့ သန်း ၈၀ စာလောက်ကို ကျနော်တို့က ၁၅ သန်း ၁၆ သန်းနဲ့ ရမှာ ပေါ့နော်။ နောက်အဓိက အမြတ်က ကျနော်တို့အတွက် နည်းပညာ ရတယ်။ နောက် ဒီကနေမှ ဆင့်ပွါးပြီး ဆက်သွယ်ရေး communication အတွက် မိုက်ခရို satellite တွေ ဆက်ပြီးတော့ သွားမလားပေါ့။
ဆိုပါတော့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် disasters တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေ အမြဲတမ်း ထိတွေ့ခံစား နေရတာ၊ ဒါတွေကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ။ တခုခု ဖြစ်လို့ရှိရင် ဆုံးရှုံးမှုနည်းအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ဖို့ disasters management လုပ်ဖို့ အတွက် ဒီ satellite images ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံ တွေက အများကြီး အထောက် အကူပြုတယ်ပေ့ါ။ အဲဒီအတွက်ကို ကျနော်တို့က ကြိုးစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မေး။.။“ဆရာတို့ တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ ဒီဂြိုဟ်တုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ လုပ်ဖို့ ရှိပါလဲဆရာ။”
ဒေါက်တာကြည်သွင်။.။“ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်မှာ အဓိကပညာရပ် ၅ ခု ရှိတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါတွေက ဒီဂြိုဟ်တု၊ ဒုံးပျံတွေ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေခံပညာ တွေကို သင်ကြား ပေးတဲ့ လိုင်းတွေ ပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ ပထမ ခြေလှမ်းအားဖြင့် ဒီဂြိုဟ်တု စပြီးတော့ လွှတ်နိုင်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ ရလာမယ်။ တဖက်ကလည်း နိုင်ငံတော်က အာကာသ အေဂျင်စီ ထူထောင် လာတဲ့ အခါမှာ အဲဒီ အာကာသအေဂျင်စီရယ်၊ ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်ရယ် အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဂြိုဟ်တုနည်းပညာတွေ၊ ဒုံးပျံနည်းပညာတွေ၊ အာကာသနည်းပညာ အသုံးချမှုတွေနဲ့ နိုင်ငံတော်အတွက်ကို ပံ့ပိုးနိုင်အောင် ပေါ့နော်၊ ဆက်လုပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ နောက် အခု ကျနော်တို့ စလွှတ်တာကတော့ ကမ္ဘာမြေ လေ့လာရေး ဂြိုဟ်တုပေါ့။ ဒါကနေမှ ဆက်ပြီး နိုင်ငံအတွက် လုိုအပ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုတွေ၊ navigation လမ်းညွှန်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဂြိုဟ်တု satellite တွေ၊ အဲဒီအထိအောင် ကျနော်တို့ အတွေ့အကြုံတွေ ရလာတဲ့ အချိန်မှာ ရေရှည်အနေနဲ့ ဆက်လုပ်သွားဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်ဗျ။”
မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနဲ့ အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာကြည်သွင်ပါ။
ဒီတပတျတော့ မွနျမာနိုငျငံ လကွေောငျးနဲ့ အာကာသကညာ တက်ကသိုလျကနေ နိုငျငံ့အတှကျ ကိုယျပိုငျဂွိုဟျတု လှတျတငျဖို့ ဘာကွောငျ့ ကွိုးစားကွတယျ ဆိုတာကို ပါမောက်ခခြုပျ ဒေါကျတာကွညျသှငျကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
ဂွိုဟျတုလှတျတငျဖို့ အတှကျ မွနျမာနိုငျငံက ပထမဆုံးစပွီး လုပျဆောငျတာဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ ဖွဈပွီး Intelsat ကုမ်ပဏီရဲ့ ဆကျသှယျရေး channel လိုငျးကို ငှါးသုံးတဲ့ MyanmarSat 1 နဲ့ ၂၀၁၉ မှာ MyanmarSat2တို့ကို လှတျတငျခဲ့ပွီး လာမယျ့ ၂၀၂၁ နှဈဆနျးမှာတော့ ကမ်ဘာမွလေလေ့ာရေး ဂွိုဟျတုကို လှတျတငျဖို့ အတှကျ ပွငျဆငျနပေါပွီ။ ဆကျသှယျရေးအတှကျ ပထမလှတျတငျခဲ့တဲ့ ဂွိုဟျတု ၂ ခုနဲ့ အခု နောကျဆုံးလှတျတငျမယျ့ မွကေမ်ဘာလလေ့ာရေးဂွိုဟျတု ကှာခွားခကျြကို ကွညျ့ရအောငျပါ။
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။. ။“ဒီ communication satellite ဆကျသှယျရေးဂွိုဟျတုကတော့ ပထမက condosat ဆိုတာ- နိုငျသလောကျနဲ့ transponder ဝယျပွီး ကနြျောတို့ရဲ့ ဆကျသှယျရေးကဏ်ဍမှာ အငျတာနကျတို့ ရုပျသံထုတျလှတျတာတို့ကို အသုံးခတြယျ။ နောကျ အခု ဒုတိယတဆငျ့က jointSat ပေါ့နျော။ intelSat နဲ့ ကနြျောတို့ မွနျမာနဲ့ တဝကျစီပေါ့။ ဆိုတော့ နညျးပညာအားဖွငျ့က Intelsat က အကုနျလုပျတာပေါ့နျော။ ကနြျောတို့က ပိုကျဆံထညျ့ဝငျပေးတာ၊ ရလာတဲ့ဟာကို ကနြျောတို့ အသုံးခတြာ။ ဒါပဲရှိတာပေါ့နျော။
အခုဒီ အကောငျအထညျဖျေါမယျ့ ကမ်ဘာမွေ လလေ့ာရေးဂွိုဟျတုကတော့ ကနြျောတို့ ဆောကျတာ ပွုတာရော အကုနျလုံး အလုံးစုံ ကိုယျ့ဆီက ပိုငျတဲ့ ဂွိုဟျတုပေါ့နျော။ နောကျ ဒီအစီအစဉျထဲမှာပဲ ကနြျောတို့က တခါထဲ နညျးပညာလှဲပွောငျးမှု ဆိုတဲ့ဟာ၊ ဒါက ဒီဂွိုဟျတု တခုကို ဘယျလို ဒီဇိုငျး လုပျမလဲ၊ ဘယျလိုတညျဆောကျမလဲ၊ လှတျတငျမလဲ၊ ဘယျလိုထိနျးကြောငျးမလဲ၊ ရလာတဲ့ image ဓါတျပုံတှကေို ဘယျလို အသုံးခမြလဲ၊ ဒီဟာတှအေတှကျ HR (Human Resources) training သငျတနျးပေးလကေ့ငျြ့တာတှလေညျး ဒီအထဲမှာ ပါမှာပါ။ ဒါက ရရှေညျအတှကျပါ ရညျရှယျပွီး လုပျတာပါ။ ဒါက ကိုယျတိုငျ အလုံးစုံ ပိုငျတဲ့ ဂွိုဟျတု ဖွဈတာပေါ့။ ဟိုတုနျးကတော့ တဝကျစီနဲ့ ငှါးတာနဲ့ ပေါ့နျော။
အခု မိုကျခရို စကျတလိုကျ microsatellite ကတော့ ကုနျကစြားရိတျလညျး သကျသာတယျ။ ဆိုတော့ လှတျတငျရတဲ့ စားရိတျတှကေလညျး သကျသာတယျ ပေါ့နျော။”
မေး။. ။“ဟုတျကဲ့ဆရာ မိုကျခရို စကျတလိုကျကို ရှငျးပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။. ။“စကျတလိုကျတှကေို သူတို့ရဲ့ weight အလေးခြိနျပျေါ မူတညျပွီး အတနျးအစား ခှဲတာပေါ့နျော။ ဥပမာ ဆကျသှယျရေးဂွိုဟျတု communication satellite ဆိုရငျ ၂ တနျ- ၃ တနျလောကျအထိ လေးတယျ။ နောကျ geostationary ဆိုတဲ့ ကမ်ဘာပတျလမျးက အဝေးကွီး ပေါ့နျော။ ကီလိုမီတာ ၃ သောငျး ၄ သောငျး အဲဒီ လောကျအထိကို တငျတယျ။ ကမ်ဘာကွီးနဲ့ အတူတူပဲ ကမ်ဘာက ၂၄ နာရီမှာ တပတျလညျ သလိုပဲ ဒီဂွိုဟျတု ကလညျး ကမ်ဘာတပတျ ပတျဖို့ရာ ၂၄ နာရီ ကွာတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့က communicate လုပျလို့ ဆကျသှယျလို့ရတယျ။ broadcasting အသံလှငျ့လို့ ရတယျ။ သူက အကွီးဆုံး ပေါ့နျော။ ကီလိုဂရမျ တထောငျနဲ့ ငါးရာ ကွားထဲမှာ လေးတယျ။ ကီလိုဂရမျ တရာ အထိအောငျက မိုကျခရိုစကျတလိုကျ ထဲ ပါပါတယျ။ သူ့အောကျ နဲတဲ့ ၁၀ ကီလိုဂရမျ တို့. ဘာတို့က နာနိုစကျတလိုကျတို့၊ ပီဆို စကျတလိုကျတို့ ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ အလေးခြိနျပျေါ မူတညျပွီး ဂွိုဟျတုအမြိုးအစား ကို ခှဲခွားသတျမှတျတာပါ။”
မေး။. ။“အခုလှတျတငျတဲ့ ဟာက Micro Satellite ပါလား ဆရာ။”
မေး။. ။“ဒီမွနျမာနိုငျငံကနပွေီးတော့ ဒီလိုမြိုး ကိုယျပိုငျဂွိုဟျတု ဘယျနှဈလုံးလောကျ လှတျတငျဖို့ လြာထား ပါလဲဆရာ။”
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။. ။“အခု ဒီစီမံကိနျးထဲမှာ စောစောက ပွောတဲ့ ဒီ ဂွိုဟျတု ၂ လုံးတငျမှာ ရှိတယျ။ ကိုယျ့ဂွိုဟျတုကို ထိနျးကြောငျးမယျ့ ground control station မွပွေငျထိနျးခြုပျရေးစခနျး မွနျမာပွညျမှာထားရှိမယျပေါ့။ ကိုယျတိုငျ နောကျပိုငျး ကိုယျ့ဂွိုဟျတုကို ကိုယျ့ဟာကိုယျ ထိနျးကြောငျး မယျပေါ့နျော။ ကနြျောတို့က နညျးပညာ ရဖို့ အတှကျ Human Resources တှကေိုလညျး တှဲပွီးတော့ train လုပျမယျ။ ထရိနျးလုပျရငျးနဲ့ စကျတလိုကျ laboratory ဓါတျခှဲခနျး မွနျမာပွညျမှာ ထူထောငျမယျ ပေါ့နျော။ ဂွိုဟျတု - ဒီမိုကျခရိုစကျတလိုကျ ဆောကျဖို့ လိုအပျတဲ့ စကျပစ်စညျးတှေ (equipment) တှေ တခါထဲ ဒီစီမံကိနျး ထဲမှာ ပါတယျ။ ပါတော့ ၊ နောကျ တတိယမွောကျ အလုံး ဆို လိုတဲ့ ပစ်စညျးပဲ ဝယျပွီးတော့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ develop လုပျပွီးတော့ ဆိုရငျ ကုနျကစြားရိတျလညျး အမြားကွီးသကျသာသှားမယျ။ ဂွိုဟျတု ဆောကျရမယျ့ နညျးပညာလညျး ပိုရတာပေါ့။
ဒီမိုကျခရို စကျတလိုကျနဲ့ ကနြျောတို့က communication ဆကျသှယျရေးကို ကူးယူမယျ ပေါ့နျော။ ဒါဆိုရငျ ကိုယျ့ နိုငျငံရဲ့ ဆကျသှယျရေး ကဏ်ဍ အတှကျရော၊ ကမ်ဘာမွေ လလေ့ာရေးကဏ်ဍ အတှကျရော ဒီဂွိုဟျတုကို ကိုယျ့ဟာကိုယျ တညျဆောကျ နိုငျတဲ့အထိ ကနြျောတို့က ရရှေညျ ရညျရှယျတာပေါ့ခငျဗြ။”
ဒါ တျောတျောဝမျးသာစရာပါ ဆရာ၊ ဒါမြိုး လုပျနိုငျတယျ ဆိုတာလေ။
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။. ။“ကနြျောတို့က ဒီဂွိုဟျတုနညျးပညာက နိုငျငံတခုရဲ့ ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျမှု အတှကျ အမြားကွီး အထောကျအကူ ပွုတယျ ဆိုတဲ့ဟာကို သိတယျ ဆိုပမေယျ့လညျး လုပျနိုငျတဲ့ အငျအားပေါ့နျော၊ နောကျတခါ ပံ့ပိုးနိုငျတဲ့ ငှရေေး ကွေးရေးပိုငျးရော၊ တခါ ဒီလို လုပျဖို့ လိုအပျတယျ ဆိုတာကို လမျးညှနျပေးနိုငျတဲ့ လူကွီးတှေ ပျေါမှာလညျး အမြားကွီး မူတညျပါတယျ။ အမှနျတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ အစိုးရသကျတမျး တုနျးကလညျး တခု ကွိုးစား ခဲ့ဘူးတာ ရှိတယျ။ သို့သျော မလုပျဖွဈခဲ့ ဘူး ပေါ့နျော။ အခု လကျရှိ အစိုးရ လကျထကျမှာတော့ ဒါကို တျောတျော လေးကို အားလညျး ပေးတယျ။ ဒီ ဂွိုဟျတု လှတျနိုငျတယျ ဆိုတာ ဂုဏျတခုအတှကျ လုပျတာမြိုး မဟုတျဖူး။ တကယျလိုအပျခကျြကို ရှိနတော။”
မေး။. ။“ဘယျလို လိုအပျခကျြပါလဲ၊”
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။. ။“ဒိဂွိုဟျတုအတှကျ feasibility ဖွဈနိုငျခြေ တှကေို တှကျဖို့ လုပျတဲ့ အခါ ဒီ ဝနျကွီးဌာနတှကေို ကနြျောတို့ စဈတမျးတှေ ကောကျပါတယျ။ ဒီ Satellite Image ကောငျးကငျဂွိုဟျတု ဓါတျပုံတှေ ဘယျလောကျ လိုသလဲ၊ ဘယျလောကျ resolution လိုသလဲ၊ ဘယျလောကျ ဧရိယာ လိုသလဲ၊ တလကို ဘယျနှဈကွိမျ လိုသလဲ၊ တနှဈကို ဘယျနှဈကွိမျ လိုသလဲ စသဖွငျ့ ဒီဟာတှေ အကုနျလုံး မေးခှနျးတှေ စုပွီးတော့ ကောကျပါတယျ။ ကောကျတဲ့ အခါမှာ ရလာတဲ့ သူတို့ရဲ့ resolution တှေ၊ ဧရိယာတှေ အကွိမျ အရအေတှကျ တှပေျေါ မူတညျပွီးတော့ ကနြျောတို့ ဝယျရမယျ ဆိုရငျ အဲဒီ ၂၀၁၈ တုနျးက ဂွိုဟျတုဓါတျပုံ ဈေးနဲ့ တှကျတာကို တနှဈတနှဈကို ဒျေါလာ ဆယျသနျးကြျော လောကျ ကုနျမယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ ဝယျနိုငျလား ဆိုတော့ မဝယျနိုငျဘူး။ အဲဒီလကျေကွီးကို။ မဝယျနိုငျတဲ့ အတှကျ သုံးသငျ့ရဲ့ သားနဲ့ကနြျောတို့ မသုံးနိုငျခဲ့ဘူး။ အလကားရတဲ့ image ပုံတှပေဲ ကနြျောတို့ သုံးရတယျ။ ပုံရိပျပွတျသားမှု - resolution တှကေ မကောငျးဘူး။ သို့သျော ဒါနဲ့ပဲ အလုပျဖွဈအောငျ လုပျရတယျ ပေါ့နျော။
အခု ကနြျောတို့က ဒီ စီမံကိနျး တခုလုံးမှ စောစောက ပွောသလို ဂွိုဟျတု ၂ လုံးပါမယျ။ HR တှေ ထရိနျနငျ လုပျတာ ပါတယျ။ satellite lab ပါတယျ။ မွပွေငျထိနျးသိမျးရေး စခနျး ground station တှေ ပါတယျ။ အကုနျလုံးပေါငျးမှာ ကနြျောတို့က ၁၅ သနျး ကြျောကြျော ၁၆ သနျး နီးပါးပဲ ကတြယျ။ ဆိုတော့ စောစောလေးက image ဝယျရငျတောငျ ကနြျောတို့က တနှဈထဲတငျ ဒျေါလာ ဆယျသနျးလောကျ ကုနျမယျ။ နိုငျငံတျော ဘတျဂကျြ အနနေဲ့။ အခု ကနြျောတို့က ပထမ တလုံရယျ နောကျတခါ ဒုတိယအလုံးလှတျမှာက စုစုပေါငျး ၈ နှဈလောကျ သုံးလို့ ရတယျ။ ၈ နှဈဆို ထားပါတော့ သနျး ၈၀ စာလောကျကို ကနြျောတို့က ၁၅ သနျး ၁၆ သနျးနဲ့ ရမှာ ပေါ့နျော။ နောကျအဓိက အမွတျက ကနြျောတို့အတှကျ နညျးပညာ ရတယျ။ နောကျ ဒီကနမှေ ဆငျ့ပှါးပွီး ဆကျသှယျရေး communication အတှကျ မိုကျခရို satellite တှေ ဆကျပွီးတော့ သှားမလားပေါ့။
ဆိုပါတော့ သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျ disasters တှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ပွညျသူတှေ အမွဲတမျး ထိတှခေံ့စား နရေတာ၊ ဒါတှကေို ဘယျလို ကာကှယျမလဲ။ တခုခု ဖွဈလို့ရှိရငျ ဆုံးရှုံးမှုနညျးအောငျ ဘယျလို လုပျမလဲ ဆိုတဲ့ သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျ စီမံခနျ့ခှဲမှု လုပျဖို့ disasters management လုပျဖို့ အတှကျ ဒီ satellite images ဂွိုဟျတုဓါတျပုံ တှကေ အမြားကွီး အထောကျ အကူပွုတယျပေ့ါ။ အဲဒီအတှကျကို ကနြျောတို့က ကွိုးစားရတာ ဖွဈပါတယျ။”
မေး။. ။“ဆရာတို့ တက်ကသိုလျကနပွေီးတော့ ဒီဂွိုဟျတုနဲ့ ပတျသကျပွီး အနာဂတျမှာ ဘာတှေ လုပျဖို့ ရှိပါလဲဆရာ။”
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။. ။“ကနြျောတို့ တက်ကသိုလျမှာ အဓိကပညာရပျ ၅ ခု ရှိတယျပေါ့နျော။ အဲဒါတှကေ ဒီဂွိုဟျတု၊ ဒုံးပြံတှေ အတှကျ လိုအပျတဲ့ အခွခေံပညာ တှကေို သငျကွား ပေးတဲ့ လိုငျးတှေ ပေါ့နျော။ အဲဒီမှာ ပထမ ခွလှေမျးအားဖွငျ့ ဒီဂွိုဟျတု စပွီးတော့ လှတျနိုငျမယျ ဆိုလို့ရှိရငျ ဒီဟာနဲ့ပတျသကျတဲ့ နညျးပညာတှေ၊ အတှအေ့ကွုံတှေ ရလာမယျ။ တဖကျကလညျး နိုငျငံတျောက အာကာသ အဂေငျြစီ ထူထောငျ လာတဲ့ အခါမှာ အဲဒီ အာကာသအဂေငျြစီရယျ၊ ကနြျောတို့ တက်ကသိုလျရယျ အပွနျအလှနျ ပူးပေါငျးပွီး နိုငျငံအတှကျ လိုအပျတဲ့ ဂွိုဟျတုနညျးပညာတှေ၊ ဒုံးပြံနညျးပညာတှေ၊ အာကာသနညျးပညာ အသုံးခမြှုတှနေဲ့ နိုငျငံတျောအတှကျကို ပံ့ပိုးနိုငျအောငျ ပေါ့နျော၊ ဆကျလုပျသှားဖို့ ရှိပါတယျ။ နောကျ အခု ကနြျောတို့ စလှတျတာကတော့ ကမ်ဘာမွေ လလေ့ာရေး ဂွိုဟျတုပေါ့။ ဒါကနမှေ ဆကျပွီး နိုငျငံအတှကျ လိုအပျတဲ့ ဆကျသှယျရေး ဂွိုဟျတုတှေ၊ navigation လမျးညှနျတာနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဂွိုဟျတု satellite တှေ၊ အဲဒီအထိအောငျ ကနြျောတို့ အတှအေ့ကွုံတှေ ရလာတဲ့ အခြိနျမှာ ရရှေညျအနနေဲ့ ဆကျလုပျသှားဖို့ ရညျမှနျးထားပါတယျဗြ။”
မွနျမာနိုငျငံလကွေောငျးနဲ့ အာကာသပညာ တက်ကသိုလျက ပါမောက်ခခြုပျ ဒေါကျတာကွညျသှငျပါ။